Media Na-adaghị Ebe Ọ Bụ Maka na Enweghị Okwukwe na Onwe Ya | Martech Zone
Mgbasa Ozi Adabaghị N'ihi Na Enweghị Okwukwe na Onwe Ya
Nyaahụ ka mụ na ya nwere mkparịta ụka dị ukwuu Brad Shoemaker, onye mgbasa ozi nke obodo nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na-anwa ịdọrọ redio n'ime afọ dijitalụ. Ọ dabara na enyi ọzọ, Richard Sickels kwuru, gara ije n'ọfịs. Richard nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme na redio. Anyị na-ekwu okwu banyere ụlọ ọrụ redio ma m gara n'ihu na-eche banyere ya n'abalị ụnyaahụ.
As ere ikuku na-aga n'ihu iju na alaeze redio na-aga n'ihu na-agbakọ ma na-eme ka ọ dịkwuo ike, ọ na-arụtụ aka na nsogbu ahụ na isi nke mgbasa ozi ọdịnala… ha ekwenyeghi na onwe ha ọzọ. Ekwenyere m na ọ bụ nsogbu yiri nke ahụ na akwụkwọ akụkọ na telivishọn. Kama ịhazigharị onwe gị, nkewa, ịnabata teknụzụ obodo na nke mmekọrịta industries ụlọ ọrụ ndị a na-aga n'ihu na-abụghị akụkụ. Nke a na - eme oghere n'etiti isi mmalite nke ozi na ndị na-ege ntị na-anwa ijikọ ya.
Nkwado na njikọta bụ ahịrịokwu jikọtara ọnụ na azụmaahịa ụwa. Ha na ego ndi ozo. Y’oburu mee ka ikike gi hazie gbasaa ma gbasawanye iru ya, o bu ihe ezi uche di na ya na iwetulata ego nke umu ihe omuma. Stationslọ ọrụ redio na-agbakọ kpakpando mba ma hapụ ụlọ ọrụ ha ka ha tọgbọ chakoo. Akwụkwọ akụkọ na-aga n'ihu na-asọpụrụ akụkọ Associated Press ma belata ndị ọrụ mpaghara. Stationslọ ọrụ telivishọn na-aga n'ihu na-azụ ahịa talent na ahịa na ntụgharị dị ukwuu.
Ọ bụ n'ihi na ha ekwekwaghị na talent ha. Ọ bụrụ na mgbasa ozi na ịde blọgụ akụziworo anyị ihe ọ bụla, ọ bụ na ọchịchọ maka ụdị dịgasị iche iche, nke ahaziri iche, nkewa, nke nwere oke agụụ na-arị elu, ọ na-ebelata. Ndị mmadụ na-achọkwu ozi, ọ bụghị obere, gbasara ndụ ha, ihe omume ntụrụndụ ha, azụmaahịa ha na gọọmentị ha. Ndị na-elekọta mmadụ anaghị arị elu n'ihi teknụzụ, ha rịrị elu n'ihi na ha kwenyere na onwe ha.
Lebe anya karịa saịtị mgbasa ozi ọdịnala ọ bụla na ọ bụ otu ihe nzuzu ochie ahụ… ọdịnaya nke ọdịnaya rabara n'etiti oké osimiri nke mgbasa ozi na-adọpụ uche. More mgbasa ozi pụtara ọzọ revenue ziri ezi? Odighi ezi. Ha na-atụgharị ọdịnaya anyị ji kpọrọ ihe karịa. Ma ugbu a, uru nke nkezi ọdịnaya ha na-enye dị na mbelata. Ọzọkwa… ọ bụghị n'ihi onye na-ajụ ase, kama ọ bụ n'ihi oke agụụ nke olu dị n'azụ ya.
Stationslọ ọrụ redio, ọkachasị, bụ ezigbo njiri mara, egwu, na iru nke onwe. Ihe mere ha ji aga n'ihu na-elekwasị anya ere ikuku kama ere olu karịrị m. Ekwesịrị m ịbanye n'ụlọ ọrụ redio ọ bụla wee hụ ọnụego ha maka inyere ndị azụmaahịa aka ịmepụta mmemme ọdịyo nke ha, kesaa mmemme ahụ site na ngwa mkpanaaka na ngwa weebụ, na ị nweta ego ha ga enweta na azụmaahịa ha site na ịmata, ịtụkwasị anya na iru ndị ziri ezi. Ihe ngosi ahụ adịghịdị mkpa ịgba ọsọ na igwe ikuku! Onye na-ajụ ase ahụ enweghị nsogbu… ọ bụ nkwenye siri ike na olu a nụrụ nke ahụ dị mkpa.
Amaghị m na enwere olile anya maka akwụkwọ akụkọ - akụrụngwa dị mkpa iji gaa n'ihu na-ebi akwụkwọ na osisi nwụrụ anwụ ma kesaa ọdịnaya ahụ dị oke ọnụ. Ha kwesiri itufu ndi oru nta akuko ma tinye ego ha na talent nke obodo ka ha tinyeghachi uru ha na ulo oru ha nwuru anwu. Igwe onyonyo yiri ka ọ bụ naanị ya nwere olile anya social na-anabata mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma na-agbanyekwa usoro ha na-ekwenyeghị site na interwebs na ndị agụụ na-agụ ya na-eche ya. Ọ ga-amasị m ịhụ ha ka ha meghere ọnụ ụzọ maka azụmaahịa na ndị ahịa chọrọ iji vidiyo, na-enweghị akara oku, iji mepụta, kesaa ma chekwaa vidiyo nke aka ha.
Enwere m mmasị na mgbasa ozi ọdịnala ma nọgide na-ekwere na ike nke ndị mmadụ n'azụ onye ọ bụla na ndị a. Achọrọ m ka ha kwere na onwe ha.
Cheta na: Agụọla m Eulogy maka Twitter na ojuju nke mmekorita Twitter. N'ụzọ na-emegide onwe m, ahụrụ m ntọhapụ mgbasa ozi ụbọchị ole na ole tupu mgbe ahụ nke touted nke Twitter ibuỌzọ 14 nde ọrụ. Afraidjọ na Twitter nwere ike ịgbaso nzọụkwụ nke mgbasa ozi ọdịnala, na-elekwasị anya nku anya kama ogo nke ozi ọ na-enye. M na-atụ anya bụghị… ma anyị ga-ahụ.
Tags: Kwereịde blọgụakwụkwọ akụkọRadioelekọta mmadụ mediatelivishọn
Douglas Karr Thursday, May 1, 2014 Friday, May 2, 2014
Ikwusi ike: Kọwaa ma rụkọta ọrụ vidio gị
Otu esi egbochi mgbochi data na World Omni-Channel